Nkwekọrịta nke ndị na-eme mkpesa na-agbagha na Peoria, Illinois | Thomas Howard
Ndị na-eme mkpesa na-agbagha
Cannabis Nkwekọrịta Ndị Na-esemokwu Okwu Ahụ
Na azụmahịa ọ bụla, nkwekọrịta na-adị irè mgbe ndị otu niile nwere ike ikwenye na usoro ya. Ọ bụrụ na enwee nghọtahie, otu akụkụ agabiga nkwekọrịta ahụ, esemokwu nkwekọrịta na-ebilite. Esemokwu nkwekọrịta cannabis, dị ka esemokwu ndị ọzọ, enwere ike idozi ma pụọ ​​n'ụlọ ikpe.
Bredị esemokwu a na-ebilite mgbe otu oriri anaghị enye dị ka ekwere nkwa. N'ọnọdụ dị otú ahụ, kọntaktị a na-enweghị mgbagha, ndị otu ihe metụtara nwere ike ịhọrọ ịkpọpụ otu ndị na-asọpụrụghị akụkụ ha na ahịa ahụ.
Ọ bụrụ na ndị otu metụtara meriri, akụkụ nke ọzọ na-akwụ ụgwọ maka mmebi. Ndi otu ha nwere ike kpebie idozi ihe na paseeji site na enyemaka nke onye ọka iwu tozuru oke. Ọzọ ndị ọzọ maka mmebi nkwekọrịta gụnyere arụmọrụ akọwapụtara, yana kagbuo yana iweghachi.
Agbanyeghị amaara dị ka mmebi adịteghị aka, ụdị mmebi a anaghị emebi isi nkwekọrịta ahụ nke pụtara na nkwekọrịta a ka dị ire. Agbanyeghị na nkwekọrịta adịghị agbanwe, otu nke na-agabigaghị nkwekọrịta ahụ nwere ike gbaa akwụkwọ maka mmebi ahụ.
A na-achịkwa ụlọ ọrụ cannabis nke ukwuu, yana n'ihi na iwu na-aga n'ihu na-agbasa, ọ bụ ihe dịịrị ndị nwere ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ịchọta onwe ha na esemokwu. Nke a bụ ebe ndị ọka iwu nkwekọrịta cannabis na-abata.
Ndị ọka ikpe nwere ahụmịhe zuru oke na ngalaba a nwere ike inye aka na mgba na mkpezi mgbe esemokwu nkwekọrịta bilitere. Mgbe inwere onye ọka iwu nwere nsogbu n'akụkụ gị, ị ga - echekwa ma ikikere azụmaahịa gị yana akụ ndị ọzọ nwere ike itinye nsogbu ma ọ bụrụ na esemokwu nkwekọrịta.
Ọbụna mgbe enweghị esemokwu, enwere ọtụtụ nsogbu nchịkwa nke ndị nwere azụmaahịa na-edozi site n'oge ruo n'oge. Onye ọka iwu na-enyere aka inye ndụmọdụ banyere ihe a ga-eme iji soro n'iwu mgbe niile.
Abụ m ọka ikpe Thomas Howard, m na ndị otu ndị ọka iwu bụ ndị maara nke ọma na ụlọ ọrụ cannabis. Basedlọ ọrụ anyị hiwere isi na Peoria, Illinois, ebe anyị na-enye nduzi na ndụmọdụ gbasara iwu, yana inyere ndị na-azụmaahịa aka ịmalite azụmahịa cannabis na steeti. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ọka iwu na mpaghara Peoria, kpọtụrụ anyị, anyị ga-enwe obi ụtọ inye aka.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ị ga - eji soro ụlọ ọrụ anyị rụọ ọrụ. Maka otu, anyị maara otu esi agha ọgụ ma chekwaa ahịa na akụ anyị. Anyị ghọtara ụlọ ọrụ cannabis nke ọma ma mara ihe ị ga - eme mgbe ịchọrọ nnochite.
Ọbụna nke ka mma, anyị nwere ọtụtụ afọ nke ahụmịhe. Companylọ ọrụ anyị anọwo na-arụ ọrụ nwa oge, anyị ejikwala ọtụtụ narị nkwekọrịta nkwekọrịta cannabis n'oge gara aga. Anyị na esemokwu anụ ụlọ, ịgba akwụkwọ ụlọ ikpe, na mkpezi nkeonwe.
Anyị ghọtara ihe niile cannabis chọrọ dịka iwu siri ike iji nyere gị aka ịchekwa azụmaahịa gị. Anyị makwaara ihe anyị ga-eme mgbe esemokwu nke ndị otu na-etinye achụmnta ego ị na-agba mbọ irube nsogbu.
Mpaghara ọbụla na - echegbu onwe gị, ịnabata gị ịgwa anyị okwu, anyị ga - enyere gị aka nyochaa nhọrọ gị ka ị na - ahụ na ị ga - arụ ọrụ na iji usoro iwu.